Uchungechunge Lokuvikelwa Kwezokwelapha
I-10L single flow flow oxygen concentrator esitokweni manje
Isikhathi Iposi: Aug-31-2021
I-10L single flow flow oxygen concentrator esitokweni manje Izinsuku, ukungabikho kwe-10L oxygen concentrator kwaba kubi kakhulu. Kusetshenziswa ukusebenza kwe-adsorption ngesihlungo samangqamuzana, ngokusebenzisa isimiso somzimba, nge-compressor enkulu engenawo uwoyela njengamandla, i-nitrogen emoyeni ...Funda kabanzi »
Ama-concentrator we-10L oksijini anesitoko manje.
Isikhathi Iposi: Aug-10-2021
Ama-concentrator we-10L oksijini anesitoko manje. Manje izinsuku izindawo eziningi zishoda ngama-oxygen concentrators futhi ama-oda amaningi aya e-factory yaseChina. Njengoba abathengi abaningi ngokwengeziwe bethutheleka eChina, isikhathi sokulethwa sikhiqizi womoya-mpilo waseShayina siya ngokuya siba side. Manje isikhathi sokulethwa kwe-oxygen ge ...Funda kabanzi »
Ngemuva kokuqhuma kwe-oxygen concentrator eGangapur, eRajasthan, lo wesifazane wabulawa kanti umyeni wakhe usesimweni esibucayi
Kuvela ukuthi ukusetshenziswa kwesitholi-moya esingasebenzi kahle ngabashadikazi eGangapur City, eRajasthan kube yingozi ngoba le nto iqhume lapho ivulwa. Unkosikazi ushonile kanti umyeni ulimale kanzima engozini. Lesi sigameko senzeke esifundeni sase-Udaimol eGangapur. A ...Funda kabanzi »
Uyini umehluko phakathi kwemaski ye-KN95 ne-KN90?
Isikhathi Iposi: Jul-27-2021
1. Amabanga ahlukene. Imaski i-KN90 inezinga eliphansi lokuvikela elingenawo uwoyela kune-KN95. 2. Ukusebenza okuhlukile kokuhlunga. Isifihla-buso i-KN90 singahlunga ngaphezu kwama-90% wezinto eziyizinhlayiyana; Isifihla-buso seKN95 singahlunga ngaphezu kwamaphesenti angama-95 wezinto eziyizinhlayiyana. 3. Ukungena komoya okuhlukile. Isimilo ...Funda kabanzi »
Amanye amathiphu ezimaski zobuso zezokwelapha nezomphakathi
Isikhathi Iposi: Jul-06-2021
Amanye amathiphu ezimaski zobuso zezokwelapha nezomphakathi 1.Imaski ingagezwa futhi isetshenziswe kabusha? Angikwazi! Amaski ngokuvamile ayindwangu engalukanga + ungqimba wokuhlunga + isakhiwo sendwangu engalukanga. I-fiber fiber phakathi kufanele igcinwe yomile ukuze ithembele kumandla we-electrostatic adsorption wokuhlunga, ngakho-ke i-medic ...Funda kabanzi »
Kungani amaski evimbela ukusabalala kwegciwane?
Kungani amaski evimbela ukusabalala kwegciwane? Luhlobo luni lwezinto ezibonakalayo? Sivame ukusho ukuthi amaski enziwe ngezindwangu ezingalukiwe. Izindwangu ezingalukiwe ziyizindwangu ezingalukiwe, ngokungafani nezindwangu ezilukiwe, ezenziwe ngemicu eqondisiwe noma engahleliwe. Uma kukhulunywa ngamamaski, ...Funda kabanzi »
Imakethe ye-Global Vibrating Net Atomizer Market ngo-2021: Ukuhlaziywa kwe-SWOT kwamaDrayivu Abalulekile we-CAGR Value Growth | Izinhlobo Eziphezulu: I-Philips Healthcare, i-Omron Healthcare, Imikhiqizo Yezempilo ye-GF…
Umbiko wakamuva wocwaningo emakethe yomhlaba edlidliza i-mesh atomizer unikeza ucwaningo oluqoqekayo ekuqubukeni kwe-COVID-19 ukuhlinzeka ngemininingwane yakamuva ngezimpawu eziyinhloko zemakethe ye-mesh atomizer. Umbiko wezobunhloli uqukethe uphenyo olususelwa kusimo samanje ...Funda kabanzi »
INo Borders, Inc. Imemezela Ukuqaliswa KweMediDent Okuphumelelayo
I-ORIENTMED, AZ, Feb. 23, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) - ngeNewMediaWire - No Borders, Inc. sekela umuthi wokugoma waseMelika ...Funda kabanzi »
I-ORIENTMED inganikeza ukulethwa okufushane kusirinji ye-1ml
I-ORIENTMED inwebe umugqa wayo wokukhiqiza i-1ml wesirinji. Amandla wokukhiqiza aphindwe ngaphezu kokuphindwe kabili. Yize ishejuli yokukhiqiza igcwele ngokwanele. Kodwa-ke, i-ORIENTMED ithembisa ukuthi uma ikhasimende lifake i-oda, lizobeka phambili ikhasimende ukuletha i-syr elahlwayo eyisigidi ...Funda kabanzi »
I-ORIENTMED iqede umugqa wayo wokukhiqiza we-1ml luer lock syringe
Ngomunye Mashi 1, i-ORIENTMED yaqeda umugqa wayo wokukhiqiza we-1ml luer lock syringe. Ngokuthuthuka kwakamuva komqedazwe wembulunga yonke, isidingo semithi yokugoma siyanda. Kunesidingo esikhulayo samajojo, ikakhulukazi imijovo eyi-1ml. Ukuphendula ukukhula kobuhlanya ekufuneni imijovo, ORIENTMED ...Funda kabanzi »
Isingeniso ekusetshenzisweni kobuhlakani besirinji eyinyumba eyi-1mL
Isikhathi Iposi: Feb-19-2021
Isingeniso ekusetshenzisweni kobuhlakani be-1mL elahla ngokuzenzakalela iSirinji (izifo ezingenayo i-anorectal) Ngokuthuthuka kwesayensi yezokwelapha, isirinji eyilahlwayo esetshenziswayo isetshenziswa kabanzi emtholampilo. Isirinji eyilahlayo engu-1mL ayisetshenziswanga kuphela njalo (ekuhlolweni kwesikhumba nasekugonyweni kokuvimbela), kepha ...Funda kabanzi »
Uyini umgomo wesibhamu se-nano spra?
Uyini umgomo wesibhamu se-nano spra? Incazelo yobuchwepheshe be-atomization ukuthatha i-DU futhi isebenzise i-transducer ye-ultrasonic, ebizwa nangokuthi i-wafer, lapho isekhethi lishayela isilondolozi, isidlidlizi sidlidliza, amanzi angaphezulu kokudlidlizela abe yizinhlayiya ezincane kakhulu, ububanzi bazo obufinyelela ...Funda kabanzi »
10L olulodwa ukugeleza okusezingeni eliphezulu oxygen concentrator ...
I-10L single flow flow oxygen concentrator esitokweni manje Izinsuku, ukungabikho kwe-10L oxygen concentrator kwaba kubi kakhulu. Kusetshenziswa ukusebenza kwe-adsorption ngesihlungo samangqamuzana, ngokusebenzisa isimiso somzimba, nge-compressor enkulu engenawo uwoyela njengamandla, i-nitrogen emoyeni nokwehlukaniswa komoya-mpilo, futhi ekugcineni ithole i-oxygen ephezulu. Lolu hlobo lwe-oxygen oxygen lukhiqiza umoya-mpilo ngokushesha, ukuminyana komoya-mpilo kuphakeme, kulungele zonke izinhlobo zabantu oksijini ...
Ama-concentrator we-10L oksijini anesitoko manje. Manje izinsuku izindawo eziningi zishoda ngama-oxygen concentrators futhi ama-oda amaningi aya e-factory yaseChina. Njengoba abathengi abaningi ngokwengeziwe bethutheleka eChina, isikhathi sokulethwa sikhiqizi womoya-mpilo waseShayina siya ngokuya siba side. Manje isikhathi sokulethwa se-oxygen generator yizinsuku eziyi-15-45. Inkampani yethu izuze ukwanda kokukhipha ngokuthuthukisa ulayini wokukhiqiza. Manje kukhona amanye amayunithi angama-270 ngaphezulu esitokweni njalo ngenyanga. Sicela ubheke imininingwane elandelayo ...
60mm Petri Isitsha, Kn95 Alahlwayo Face Vuvu, Amakhithi Wokuhlola Ukukhulelwa, Alahlwayo Gloves nitrate Powder Mahhala, Idrayivu ekhipha ikhava yesicathulo, Ikhava Yezicathulo Ezokwelapha,